Umhla we-Ontario Ukhetho - nini i-Ontario Election?
Umhla woNyulo oluzayo lwe-Ontario kunye nendlela Ixesha leeNyulo zoNyaka ze-Ontario zichongiwe ngayo
Umhla woNyulo olulandelayo lwe-Ontario
Unyulo jikelele lwe-Ontario luqhutywa minyaka yonke emine ngoLwesine wokuqala ngoJuni. Unyulo olulandelayo luya kuba ngo-Juni 7, 2018.
Ixesha leeNyulo zoNyulo ze-Ontario zikhethwa
I-Ontario inemihla ehleliweyo yokhetho lonyulo . Ngo-2016, ibhilikhwe yahambisa ukhetho kunyaka owedlule ngo-Oktobha ukwenzela ukuba ugweme ukungqubana nokukhethwa koomasipala. Ngaphambili, imihla ebekwe nguMthetho woLungiso loMthetho weNyulo, 2005 .
Kukho ukukhethwa kwimihla yokunyulwa okhethwe yi-Ontario:
Ukuba umhla okhethiweyo wonyulo awufanelekanga kuba ngumhla wokubaluleka kweenkcubeko okanye zonqulo, umhla wokhetho lonyulo lukhethwa kwiintsuku ezisixhenxe emva kweLwesine ebeza kuba lunyulo lomhla.
Ukuba urhulumente ulahlekelwa yivoti engathembekanga kwintlanganiso yezomthetho edala ukhetho. Oku kunokwenzeka ngokukhawuleza kunye noorhulumente abancinci.
Ukuba unquma ukutshabalalisa umthetho.
Ukhetho lonyulo lwase-Ontario, abavoti kwisithili ngasinye okanye "ukugibela" amalungu ekhethiweyo kwiNdibano yoMthetho, i-Ontario isebenzisa urhulumente wepalamente yaseWestminster, njengasezingeni laseFransi eCanada. Inkulumbuso (intloko kaRhulumente we-Ontario) kunye neBhunga eliLawulayo le-Ontario, ngoko liqeshwe yiNdibano yoMthetho ngokusekelwe kwinkxaso eninzi. I-Opposition Official iyingxenye enkulu kunazo zonke ekulawuleni urhulumente, kunye nenkokeli yayo ibona njengeNkokeli yoPhikiswano nguSomlomo.
Imithetho yabaTyeleli bezisa utywala eCanada
I-Provincial Legislative Assemblies eCanada
Ukuqonda iPalamente yaseKhanada
Umlinganiselo weNkqubela yeKhophu ka-1970
Inkonzo Yomlilo kunye neNtsomi
Iimpawu zoBuchule beDive Shop
I-Advantage ye-Bike ye-Mountain kunye ne-650B Wheels
Konke NgoLammas (Lughnasadh)
Indlela yokugada i-Rig yakho Yinqanawa kunye nokulungiselela ukuhamba
Kutheni i-Standard Standard Enthalpy yoQeqesho lwe-O2 lilingana neZero?
Phezulu "Fumana I-Heart Heart-Pumping" Yakho Ibhola
Izinto eziqhelanisiweyo kakhulu zikaThomas Edison
Isistim yoMgangatho weSizwe weSizwe (SI)
'Ukulinganisa Ukulinganisa' Izihloko
Ngaba ikhona Umtshina weeUlamanzi weeNdawo zokuThambisa?
Iinqununu ezi-5 zeReiki